पार्टीमा गुट गर्ने आफै समाप्त हुन्छ | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » पार्टीमा गुट गर्ने आफै समाप्त हुन्छ
पार्टीमा गुट गर्ने आफै समाप्त हुन्छ
SAHARA TIMES Monday, July 2, 20180No comments
–महेन्द्र राय यादव
अध्यक्षमण्डलका सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल देशको तेस्रो ठूलो दल भएपनि सरकार बाहिर छ । फोरम चौथो शक्ति भएर पनि सरकारमा छ । यहाँसम्म फोरम नेपालले प्रदेश २ मा राजपा नेपाललाई साथमा लिएर सरकार पनि निर्माण गरेका छ । बडो चलाकीका साथ फोरम नेपाल प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सरकारमा सहभागी भयो । तर, राजपा नेपाल अन्योलनमा छन् । पार्टीभित्र पनि निकै विवाद देखिएको छ । संसदीय दलको नेतादेखि लिएर महाधिवेशनको मिति तोक्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ । यिनै र यस्तै विषयमा सहारा टाइम्सले राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवसँग गरिएको कुराकानीः
राजपा नेपालको लामो समयसम्म बैठक बस्यो के के निर्णय गर्नुभयो त ?
–हो, यसपटक राजपा नेपालको लामो बैठक बस्यो । विभिन्न विषयमा छलफल भयो । र त्यसमा केही निर्णय पनि भयो । पार्टी गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । अब पार्टीलाई कसरी ठिक तरिकाले चलाउने त्यसका विषयमा गम्भीर छलफल भयो । लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट पार्टीलाई कसरी आगाडी बढाउन सकिन्छ त्यस विषयमा छलफल गम्भिर छलफल भयो । त्यसका लािग गाउँस्तरदेखि केन्द्रसम्म कसरी पार्टीलाई सक्रिय गर्न सकिन्छ । त्यस विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
संगठन बनाउनका लागि के के निर्णय गर्नुभयो ?
–पहिलो कुरा । कुनै पनि जिवित पार्टीका लागि महाधिवेशन महत्वपूर्ण कुरा हो । समयमा महाधिवेशन गराउनु एउटा संगठनको महत्वपूर्ण कर्तव्य हुन जान्छ त्यसमा हामीले गम्भीर भएर छलफल गर्यौ । त्यसका लािग दलका नेताहरुसँग छलफल गरि महाधिवेशनको मिति तोक्ने कार्य भयो । २०७६ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने समय तोकेको छ । त्यसको तयारीका लागि पार्टी पंक्तिलाई परिचालित गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यसअघि पार्टीका र त्यसभित्रका सबै कार्य समयमा सल्टाउनु पर्छ । गाउँस्तरदेखि केन्द्रसम्म सबै कुरा लोकतान्त्रिक प्रकृया अपनाउनुपर्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्नका लािग लोकतान्त्रिक प्रकृया अपनाउनेछौं । त्यसका लागि नियमावली, विधानहरु तयार भइरहेको छ ।
तपाई हरेक कुरामा लोकतान्त्रिक प्रकृया भनिरहनु भएको छ खासमा यो लोकतान्त्रिक प्रकृया हो के यो कसरी अपनाइन्छ ?
–लोकतान्त्रिक प्रकृया भनेको एकप्रकारको विधि विधान हो । पार्टीलाई ठिक ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि तयार पारेको दस्तावेज र विधान बमोजिम सञ्चालन गर्नु नै लोकतान्त्रिक प्रकृया हो । लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट गयो भने कसैमाथि कुनै प्रकारको भेदभाव हुनेछैन । कसैमाथि असमान व्यवहार हुनेछैन । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुनेछैन । कतिपय कुरा सहमतिमो नाममा टिका लगाएर नेता तथा कार्यकर्ता भित्र्याउने खेल पार्टीमा चलिरहेका हुन्छन् । आआफ्ना कार्यकर्ता नेता तथा पार्टीमा भित्र्याएका हुन्छन् । त्यो कुरा रोकिनुपर्ने मेरो धारणा हो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म, प्रदेश तहदेखि केन्द्रसम्म समिति बनाउँदा पहिला सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ । यदि सर्वसम्मतिबाट हुन सकेन भने चुपचाप चुनावी प्रकृयामा जानुपर्छ । चुनावी प्रकृयामा गयो भने कसैलाई कुनै प्रकारको झन्झट हुनेछैन । यो नै लोकतान्त्रिक प्रकृया हो ।
सुनिन्छ, अब पार्टीमा अध्यक्षमण्डलको प्रावधान नै रहँदैन कति सही हो ?
–तपाईले ठिक सुन्नुभयो । अब पार्टी बनाउनका लागि अध्यक्षमण्डलकै प्रावधान हटाउनुपर्छ । मण्डली प्रथाको अन्त्य नभएसम्म पार्टी बन्न सक्दैन । समूहिक नेतृत्व रहनुपर्छ तर यो अध्यक्षमण्डलको प्रावधान हटाउनुपर्छ । छवटा दल मिलेर बनेको राजपा नेपालमा छवटा अध्यक्ष राख्नु त्यतिबेलाको बाध्यता थियो तर अब महाधिवेशनपछि त्यस्तै बाध्यता रहनेछैन । एक अध्यक्ष प्रणालीबाट राजपा नपाल सञ्चालन हुनेछ । अध्यक्षमण्डल बनाएपछि डम्पिङ्ग जस्तो हुन्छ । अब पार्टीलाई डम्पिङ्ग हुनबाट बचाउनुपर्छ ।
छवटा दल मिलेर राजपा नेपाल बनेको छ । महाधिवेशनपछि पनि सबै नेतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ ?
–मैले अघि नै भने कि लोकतान्त्रिक विधि अपनाएपछि सबै समस्या आफै समाधान हुन्छ । चुनावमा गएपछि अध्यक्षका लागि जजसलाई चुनाव लड्ने मन हुन्छ चुनाव लड्छ । चुनाव नलड्नेहरु पार्टीमा साधारण सदस्य भएर काम गर्छन् । पार्टीमा काम गर्नका लागि पदमै हुनुपर्छ भने होइन । साधारण सदस्य भएर पनि पार्टीका लागि काम गर्न सकिन्छ । ठूला ठूला पार्टीमा यस्तो हुन्छ । साधारण सदस्य भएर काम गर्न सकिन्छ वा एउटा सल्लाहकार समिति वा त्यस्तै कुनै समिति पनि बनाउन सकिन्छ । पार्टी एकीकरण भएको छ त्यसको असर सधैका लागि राख्नु हुँदैन । एकीकरण भएको छ भने त्यसलाई एउटै पार्र्टी बनाउनुपर्छ, नकि सधैका लागि भागबण्डा र समूहमा पार्टी चलाउने यो सोच्ने बेला आएको छ ।
आसारमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो वैशाखमा किन लाग्नुभयो । महाधिवेशन चाँडै गरेपनि हुन्थ्यो नि ?
–अरु पार्टीभन्दा राजपा नेपाल अलि फरक प्रकृतिको पार्टी हो । दुईटा दल मिलेको भएपनि हुन्थ्यो । दुईटा दल मिल्दा त्यसको व्यवस्था गर्न त्यति समस्या हुँदैन । तर, यहाँ छवटा दल मिलेको छ यो चानचुने कुरा होइन । यसको व्यवस्थापन गर्न अवश्य टाइम लाग्छ । छवटा विचारलाई एउटा विचार बनाउनुपर्छ । छवटा व्यक्तिलाई चित्त बुझाएर एउटा व्यक्ति तयार गर्नुपर्छ । कम झन्झटिलो कार्य यो होइन । एउटा सिगंल पार्टी भएको भए यतिबेलासम्म महाधिवेशन भइसकेको हुन्थ्यो तर छवटा पार्टीको संगम भएका हुनाले सोचे अनुसार नहुँदो रहेछ । त्यही भएर अलि लामो समय लिएको हो ।
तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन्छ त ?
–हुन्छ, अवश्यक हुन्छ । तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गराउनका लागि यति लामो समय लिएका हौं । पार्टीमा पनि यतिा लामो छलफल भयो । त्यसको तयारीमा हामी जुटेसकेका छौं । जिल्ला जिल्लामा सर्कुलर पठाउने काम पनि गर्छौ । जिल्ला तथा स्थानीय तहको अधिवेशन गराउँदै विभिन्न भातृसंगठनहरुको पनि गठन गर्ने काम हुनेछ । तोकिएको समयमा महाधिवशेन गर्ने राजपा नेपालक बाध्यता हो । निर्वाचन आयोगले पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन गराउन तागेता गरेको गरैछ । त्यसैले अब महाधिवेशन गराउनुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ ।
पार्टीभित्र अहिले दुईटा गुट देखिन्छ, महाधिवेशनसम्म पनि त्यस्तै गुटले प्रभाव पार्ने हो कि ?
–छैन । पार्टीमा कुनै प्रकारको गुट छैन । यो सुनियोजित रुपमा प्रचार गराइएको हो । सर्वसम्मतिले निर्णयहरु भइरहेको छ । कसैलाई कुनै कुरामा चित्त बुझ्दैन भने पार्टीमा राख्ने गर्नुभएको छ । त्यसमा छलफल हुन्छ र छिनोफानो हुन्छ । गुटको कुरा पत्रकारहरुले चलाएको हल्ला मात्र हो । र, पनि यदि पार्टीमा कसैले गुट बनाएको छ वा गुट चलाई रहेको छ भने त्यो नेता आफै समाप्त हुन्छ ।
त्यसो भए, यत्रो समय वित्तिसक्दा पनि संसदीय दलको नेता किन चयन गर्न सक्नुभएको छैन त ?
–मैले अघि पनि भनेको थिए कि अरु पार्टी भन्दा राजपा नेपाल अलि फरकखालको पार्टी हो । ठूलो पार्टी भएका हुनाले यसको निर्णय प्रकृया अलि लम्बिएको मात्र हो । संसदीय दलको नेता बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । त्यसका लागि संसदीय दलको विधान बनाउने काम भइरहेको छ । विधान तयार भइसकेपछि संसदीय दलको नेता पनि चयन गर्ने काम हुन्छ ।
संसदीय दलको नेताका लागि राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर प्रतिस्पर्धी रहेको कुरा बाहिर आएको छ कुरा के हो ?
–राजेन्द्रजी र महन्थजी मात्र होइन, पार्टीमा रहेका १७ जना सांसद पनि संसदीय दलको नेता बन्ने लायकका हुनुहुन्छ । १७ जनामध्ये कोही पनि बन्न सक्नुहुन्छ । दावी त जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाई त महन्थ ठाकुर संसदीय दलाके नेता बन्नुपर्छ भनि पक्षमा हुनुहुन्छ नि ?
–म कसैको पक्षमा छैन । म पद्धति र प्रकृयाको पक्षमा छु । अहिलेसम्मको मान्यता अनुसार पार्टीका जो अध्यक्ष हुन्छ त्यो संसदीय दलको नेता हुने देखिन्छ । र, अर्को कुरा, महन्थ ठाकुर पार्टीका संयोजक पनि हुुनुहुन्छ, उमेरले सबैभन्दा सिनियर हुनुुहुन्छ त्यस कारणले उहाँ नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने मेरो चाहना हो । यद्यपी दावी जसले पनि गर्न सक्छन् । महन्थ ठाकुर सर्वसम्मतिले संसदीय दलको नेता चयन हुनसकेन भने लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट त्यसको छिनोफानो हुन्छ ।
अन्त्यमा, तपाईहरुले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने चर्चा सुनिन्छ कहिले फिर्ता लिनुहुन्छ ?
–पार्टीभित्र छलफल शुरु भएको छ । पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार आगाडी बढ्ने कुरा हुन्छ । यद्यपी सरकारले राजपा नेपालसँग जस्तो व्यवहार गरेको छ त्यो राम्रो होइन । त्यो व्यवहारका कारण हामी समर्थन फिर्ता लिनसक्छौं । हामीले दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थियौं । दुई तिहाई बहुमत भयो भने सविधान संशोधन चाँडै हुन्छ भनेर नै हामी समर्थन गरेका थियौं । समर्थन गर्ने बेला पनि सरकारलाई नेतृत्व गरेका दलले सविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो तर हालसम्म त्यसको बारेमा बोलेको छैन । हाम्रो दलको प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी थुनामा छन् । सरकारले त्यसलाई रिहाय गर्ने पटक पटक प्रतिवद्धता जनाएका थिए तर हालसम्म छाडेको छैन । आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका, मुद्दा परेका र फरार रहेका बारेमा पनि सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ भनेका थियौं तर हालसम्म केही गर्न सकेको छैन । त्यसैले समर्थन दिएको औचित्य पुष्टि भएन भने समर्थन दिइरहने आवश्यकता रहदैन ।